काठमाडौँ, १ भाद्र । लगातार उकालो लाग्दै गएको सुनको मूल्यमा आज सामान्य गिरावट देखिएको छ । शनिबार प्रतितोला रु ७१ हजार ५०० मा कारोवार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज प्रतितोला रु ५०० ले घटेर रु ७१ हजार कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
सुनचाँदीकाे भाउ घट्याे, तोलामा कति ?
थाम्नै नसकिने गरी बढ्यो शेयरबजार, साढे चार अर्बको कारोवार
फेरि बढ्यो सुनको भाउ, तोलामा कति पुग्यो ?
तीन दिनदेखि परेको वर्षाका कारण इँटा उद्योगमा रु १५ करोड बराबरको क्षति
अष्ट्रेलिया पढेर मध्यबानेश्वरमा ‘विरयानी अड्डा’, विदेश पलायन रोकिने विश्वास